War deg deg ah: rasaas xoogan oo ka bilaabatay magaalada Muqdisho - iftineducation.com
War deg deg ah: rasaas xoogan oo ka bilaabatay magaalada Muqdisho
iftineducation.com – Rasaas xooggan oo u muuqata in hawada loo ridayo ayaa goor dhow ka bilaabatay magaalada Muqdisho xili ay socoto tirinta codadka wareega labaad ee doorashada madaxweynaha oo uu si weyn ugu horeeyo musharaxa Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Rasaasta oo u muuqata mid dabaaldeg ah ayaa ka dhaceysa afarta jiho ee magaalada Muqdisho, waxaana xusid mudan in musharaxa Farmaajo uu taageerayaal badan ku leeyahay magaalada.
Mar kasta oo ay sii bataan codadka loogu dhawaaqayo Farmaajo waxaa sii xoogeysanaya rasaasta hawada loo ridayo oo magaalada dhan isqabsatay gees ka gees.
Xaalada magaalada kacsan waxaana rasaasta badankeed ridaya ciidamada dowlada oo si weyn u taageersan Farmaajo, iyadoo hawada magaalada ay xiligan isu bedeshay dhimbilo rasaas ah oo dabaal deg ah u muuqata.
Wixii ku soo kordha kala soco wararkeena ugu horeeya insha ALLAAH
War Deg Deg Ah : Tirinta Codadka wareega labaad oo lasoo gabo gabeeyay (Sida loo kala horeeyo)
War Deg Deg Ah “Xasan Sheekh oo Tanaasulay iyo Farmaajo oo noqday Madaxweynaha Soomaaliya